एमालेको अभाव अरुले पूर्ति गर्न सक्दैन, ०७४ सालको वर्चश्व फर्काउँछः एमाले उपमहासचिव भुसाल – kalikadainik.com
एमालेको अभाव अरुले पूर्ति गर्न सक्दैन, ०७४ सालको वर्चश्व फर्काउँछः एमाले उपमहासचिव भुसाल
बुधबार, भाद्र ३०, २०७८ | १५:५४:२४ |
बुटवल । एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले पार्टीले २०७४ सालको वर्चश्व फर्काउने उद्घोष गरेका छन् । बुटवलमा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै भुसालले एमाले जिम्मेवार भएर अघि बढे ०७४ सालको वर्चश्व फर्किने बताए ।
पार्टी आन्तरिक रुपमा लोकतान्त्रिक हुन सकेन भने राष्ट्रको पनि प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने भन्दै भुसालले थपे, ‘व्यवस्थित अभ्यास गर्नुपर्छ । न्याय समानता र लोकतन्त्रको जति अभ्यास गर्न सक्छ त्यति नै राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्नसक्छ,’ उनले भने । बुद्धकै पालादेखि गणराज्यको अभ्यास भएको भन्दै उनले एमाले गणतन्त्र र लोकतन्त्र र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गरेर यसैगरी अघि बढे २०७४ सालको वर्चश्व फर्काउने ठोकुवा गरे ।
भुसालले अब दलाल पुँजीवादीविरुद्ध लड्नुपर्ने बताए । ‘त्यो बाहिर पनि लड्ने हो पार्टीभित्र हो,’ उनले भने, ‘यो काम एमालेले गर्नुपर्छ । अरुले गरेर हुँदैन । एमाले आज जिम्मेवार भइदिएन जिम्मेवार भूमिका खेलिदिएन भने के हुन्छ ? यसमा छलफल होस् । सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा पार्टीले जरा गाडिसकेको एमालेको अभाव अरुले पूर्ति गर्न सक्दैन ।’
लोकतान्त्रिक समानता न्यायमा एमाले लाग्नुपर्ने उनले बताए । ‘लोकतान्त्रिक समानता न्यायमा एमाले लाग्नुपर्छ । बलियो बनाउनुपर्छ । यही कुरा माधव नेपाललाई बुझाउन सकेनौं । उहाँले आफै बुझिदिनुभएन । किन बुझ्नुभएन ? यो कुरा माधव कमरेडले बुझ्नुपर्छ । समीक्षा गर्नुपर्छ ।
मबाट के कमी भयो अर्कोबाट के भयो समीक्षा गरौं । कसले गल्ती गर्यो कसले गरेन माधव कमरेडले समीक्षा गर्नुपर्छ । विधानबाट जब हामी समेटिएर व्यवस्थति भएर आउनेछौं, त्यसपछि माधव कमरेडलाई बुझाउन समीक्षा गराउन बाध्य पार्नेछौं । एमाले उठ्छ, धुलो टक्टक्याएर अघि बढ्छ,’ भुसालले भने ।